[Review] Son 3CE Blurring Liquid Lip | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
[Review] Son 3CE Blurring Liquid Lip | Excitinghochiminhcity
Iyo yakakurumbira 3CE imba “yakarova” muna 2020 yese ine “inotyisa” mitsetse yemiromo inoita kuti vakadzi vamire. Uye kuenderera mberi neiyi nhevedzano yezvinoshamisa mushure meimwe, “blockbuster” 3CE Blurring Liquid Lip yakaburitswa zviri pamutemo ne10 hot hit color tones inoyevedza uye inoshamisa. Mune iyi yakanaka debut, vasikana vakatadza kuita asi kupengenuka ne “humwari” mutsara wematte lipsticks nekuda kweiyo lip-inopera mhedzisiro – super concealer miromo ine yakasarudzika matte sefa. Chokwadi munguva ino yechando, toni dzinopisa dze3CE Blurring Liquid Lip ichava shamwari inodiwa mubhegi rake remazuva ese!
Ngationei chakavanzika chakavigwa mukati memutsara 3CE Blurring Liquid Lip Tarisa uone iyi yakadzama ongororo – wongororo, kuti uone kana “iyo” iine chimwe chinhu chinopisa chinoita kuti usazorore!
1 Inenge 3CE brand
2 Inenge 3CE Blurring Liquid Lip
2.1 Packaging, dhizaini ye3CE Blurring Liquid Lip
2.2 3CE Blurring Liquid Lip Lipstick Palette
2.2.1 Color So Over: Natural pink yakasanganiswa tsvuku
2.2.2 Gara Usipo ruvara: Chidhinha chitsvuku chine orenji yakareruka
2.2.3 Tsvimbo Yakatenderedza Rudzi: Cherry Rose Tsvuku
2.2.4 Tanga Iye zvino ruvara: Cold orenji tsvuku
2.2.5 Dhonza Ruvara: Orange yakasanganiswa nemagenta
2.2.6 Nude Scene color: Chiedza pasi chepingi
2.2.7 Delicate Soul color: Natural light pink ine orenji
2.2.8 Claret Ruvara: Inotonhora Tsvuku
2.2.9 Ruvara Chitsauko Pingi: Mwana wepingi
2.2.10 Bearberry color: Crimson ine tint shoma yepepuru
2.3 Mishonga mikuru ye3CE Blurring Liquid Lip
2.4 Lipstick ye3CE Blurring Liquid Lip
2.5 Hwema hwe3CE Blurring Liquid Lip
2.6 3CE Blurring Liquid Lip’s color fastness
2.7 Maitiro ekushandisa 3CE Blurring Liquid Lip
2.7.1 Mashandisirwo emiromo
2.8 Nzira yekushandisa miromo yakazara
2.9 Maitiro ekushandisa pane kutsvuka
3 Ongorora uye ruzivo 3CE Blurring Liquid Lip
3.1 Zvakanakira uye kuipa kwe3CE Blurring Liquid Lip
3.1.1 Zvakanakira 3CE Blurring Liquid Lip
3.1.2 Cons of 3CE Blurring Liquid Lip
3.2 Kupi kunotenga 3CE Blurring Liquid Lip lipstick? Ngani?
Inenge 3CE brand
3CE – 3 Pfungwa Meso, Korean cosmetic brand yakavambwa muna Ndira 2009 uye inotsigira Stylenanda. 3CE yakakurumidza kuita ruzha mumusika wekushongedza nemitsara ye “super product” ine hudiki, hunhu, uye chimiro chinoyevedza, chiratidzo che “musikana akanaka” wezana ramakore rechi21.
3CE yakakurumbira nokuda kwemitsara yayo yezvizoro ine mavara matsva nezvitayera, zvinotungamirira runako rwepwere. Kusvikira zvino, 3CE ine zvinopfuura 70 zvitoro zvechokwadi muAsia yose. Nguva imwe neimwe iyi brand “inotangisa” chigadzirwa chitsva, nhamba huru yevafashoni uye vatengi vanofarira “kumira”, vachimirira zuva rega rega, awa imwe neimwe, vachimirira kuti chigadzirwa chikuru chisvike.
READ Top 7 Các Shop Giày Auth Ở Hà Nội Cho Sneakerhead | Excitinghochiminhcity
Mumakore apfuura, 3CE rave rimwe remazita anopisa kwazvo pamusika wezvizorwa, richigamuchirwa nemafashoni ane mukurumbira uye runako mablogiki ega ega chigadzirwa chitsva uye mamirioni evatengi. sarudza.
Inenge 3CE Blurring Liquid Lip
Matte lipstick inoita kunge “yakasarudzika” inotungamira maitiro, ichigadzira yakakurumbira 3CE brand. Zvichiri nematte, yakatsetseka lipstick “zvisingakanganisike”, 3CE Blurring Liquid Lip line Ichangoburwa, yakatonyanya kukwirisa kune yakapfuura mitsara neyakasiyana shading mhedzisiro, blurring lip prints, uye super kuvanza kuremara kwemiromo. Kunyanya kunyanya, 3CE Blurring Liquid Lip inomira kunze nekugona kukuru kuramba kudonha kwemavara, kusvika 95% yakajairika ruvara, madzimai!
Chando chave pedyo, kana uchiri kuzeza kuwana “cabinet” lipstick line, 3CE Blurring Liquid Lip ndiye muponesi! Iyo yakatsetseka lipstick ye “yayo” haikonzeri yakaoma, yakatsemuka miromo, kunyangwe isina mafuta, inochengeta ruvara kweanosvika maawa masere nematoni kubva munyoro (mushutu) kudziya uye kunyengedza.
Packaging, dhizaini ye3CE Blurring Liquid Lip
3CE Blurring Liquid Lip ine denderedzwa cylindrical dhizaini Compact uye yakanakira, inotakura zvakawanda zvakafanana mukugadzira zvichienzaniswa neyekare 3CE lipstick mitsara. Muviri wakanyatso kuvakwa ne “umbozha” matte maitiro, uye inopenya zvakakwana kuti uone iyo lipstick ruvara mukati.
3CE Blurring Liquid Lipstick
Kunyanya, iyo muromo webhurashi yelipstick ichiri kugadzirwa ine nyoro yekotoni tip, iyo yakaderera iyo, iyo diki iyo, zviri nyore kumbundira miromo uye kugadzirisa huwandu hwelipstick inobviswa zvakangokwana kudzivirira. kutambisa lipstick, zvichimubatsira kuchengetedza miromo yake Chengetedza lipstick nguva dzose yakachena uye yakasimba.
3CE Blurring Liquid Lip Lipstick Palette
Color So Over: Natural pink yakasanganiswa tsvuku
Mavara akareruka sedova remangwanani anodana So Over! Iro dzvuku uye pink toni pamiromo zvese zvakasikwa uye zvakanyanya kuMadokero, yakatsetseka uye isina ruvara. Vasikana vazhinji “vanodzivirira” iyi lipstick ruvara mumabhegi avo zuva rega rega nekuti iyo makeup style ine So Over yakapusa, kutsvuka zvishoma uye eyeshadow ine toni imwechete yakanyanyisa kutaridzika. Iva nemazuva matsva akabatikana!
Gara Usipo ruvara: Chidhinha chitsvuku chine orenji yakareruka
Kana iwe uchida kuve neganda jena senyeredzi dzeKorea, usakanganwa kuisa tsvuku lipstick yakasanganiswa neorenji! Iyo orenji base lipstick ruvara inogara ichiyevedza nekuti idiki kwazvo kana ikaiswa, isingasarudze pamusoro peganda, asi zvinopesana, inoremekedzawo ganda.
Tsvimbo Yakatenderedza Rudzi: Cherry Rose Tsvuku
Iyi nyoro ruvara gamut inonyanya kukodzera kuvakadzi vanoda “muse” maitiro. Iyi ndiyo yekutanga lipstick ruvara iyo iri nyore kugadzira uye kuronga, inopenya ganda uye inosimudzira rustic maficha pachiso, ichisimudza ganda tone zvakanyanyisa uye rakanaka.
READ Vân Tay Chủng Núi Arch Là Gì, Có Ý Nghĩa Ra Sao? | Excitinghochiminhcity
Tanga Iye zvino ruvara: Cold orenji tsvuku
Hunhu vasikana, vanoda kubira, vanonyanya kutorwa moyo neichi chimiro chemavara toni. Ingoisa chidimbu chimwe chete, miromo yake “inoshandurwa” pakarepo kuita cherry inonaka izere nekunaka!
Dhonza Ruvara: Orange yakasanganiswa nemagenta
Maonero akakosha! Ruvara rutsvuku rweorenji haruna “kudzika” zvakanyanya sezvo vasikana vanowanzo funganya, pane kudaro, zvakare inobata maziso zvakanyanya. Iyi yakakosha pendi yemavara yakanaka pane chero toni yeganda, chero makeup kana kunyangwe isina makeup ichiri kumuita kuti agare achipenya!
Nude Scene color: Chiedza pasi chepingi
Kana ikaiswa yakazara, miromo ichava nevhu repinki ruvara, inoratidzira seksikäs uye zvisinganzwisisike maficha, inokwezva maziso ese. Zvisinei, kuti uite yunifomu yezwi, unoda kusanganisa make-up neganda uye maziso ezwi rimwe chete!
Delicate Soul color: Natural light pink ine orenji
Tikugashirei zuva idzva rinopenya uye rinoyevedza, rinokosha kune Delicate Soul’s inoyevedza orenji-pink ruvara. Iyi “yehumwari” toni yemavara inosimudzira yakasarudzika yepinki-chena ganda, inopenya uye yehudiki mune chero mamiriro.
Claret Ruvara: Inotonhora Tsvuku
2020 igore iro toni dzvuku dzinotonhora dzinotora chigaro maererano neyakagadzirwa makeup maitiro munyika, ndosaka Claret anongoerekana aita “nyika yelipstick ruvara” inosarudzwa nehunhu vasikana. Iri toni inoda kuti atarise pameso makeup, kunyanya eyeliners kuti ave nemukurumbira.
Ruvara Chitsauko Pingi: Mwana wepingi
Yakanyatsokodzera vasikana vanoda zvinyoro “mist” makeup, mucheche pink ruvara runobatsira vakadzi kuti vavimbe nehukadzi hwavo, hunyoro uye huzere nehunhu. Ndiani akati pink “yakanyanya kutonhorera, saka cakey”, Chitsauko Pink vachiri vakashongedza chaizvo, vasikana!
Bearberry color: Crimson ine tint shoma yepepuru
Kana achida kuratidza mazino ake machena uye kunyemwerera kunofadza, haakwanisi kubvisa maziso ake paari Bearberry nezwi dzvuku yakasviba zvishoma “yakarereka” kune yepepuru – Zvese zvisinganzwisisike uye zvine simba, zvichiratidza hunhu hwake chaihwo munzvimbo inopenya. Kunyanya, iyi toni haisvibisi ganda kana kusviba miromo zvakanyanya, vasikana, asi ine fancy uye hunhu.
Mishonga mikuru ye3CE Blurring Liquid Lip
Izvo zvitatu zvakakosha zvinoshandiswa ku “craft” 3CE Blurring Liquid Lip ndezvi:
Sirika: Inopfavisa miromo uye inovanza mitsetse yemiromo zvakakwana
Polyglyceryl-2 triisostearate: muromo wakapfava
Isononyl zvivinanoate: Inopa hunyoro kumiromo
READ 【Review】Lược nhuộm tóc thông minh có tốt như lời đồn? Có nên mua? | Excitinghochiminhcity
Kunyanya, iyi mutsara we matte lipstick hauna yakawandisa lead uye makemikari anokuvadza kune hutano. Zvinoenderana nenhamba kubva kuUS Food and Drug Administration (FDA): 3CE lipstick iri mumitsara mazana mana yelipstick ine lead yemukati isingapfuure mwero unotenderwa, saka vashandisi vanogona kuzorora nekuishandisa.
Lipstick ye3CE Blurring Liquid Lip
Lipstick yemutsetse 3CE Blurring Liquid Lip Ichi chitsva chakanyanya matte. Kana yaiswa pamiromo, lipstick inobva yaita ruvara rwakakwana kusvika 95% nechero ruvara. Chinonyanya kukosha pakutaura nezve 3CE Blurring Liquid Lip ndechekuti “yakajeka segore”, inonzwa yakapfava pamiromo uye yakanyatsogadzikana, zvisinei nekupisa kana kuoma kwekunze. Kana iyo make-up ichiyevedza zvishoma, iwe unofanirwa kuisa akawanda layers e lipstick mumutsara kuita kuti ruvara rwusvibe uye ruwedzere.
Hwema hwe3CE Blurring Liquid Lip
Iyo ichangoburwa 3CE Blurring Liquid Lip mutsara panguva ino ine inoyevedza inonaka ye candy hwema, asi yakanyanya kupfava asi isingakuriri. Paunotanga kuisa hwema, iyo inonyanya kuoneka, zvino ichapfava zvakanyanya.
3CE Blurring Liquid Lip’s color fastness
Sezvambotaurwa pamusoro, 3CE Blurring Liquid Lip inorumbidzwa nevefashoni vane mukurumbira uye runako mablogiki se super matte lipstick ine 6-8 maawa ekugara simba. Pakati pezuva rakareba uye rinoshanda, haazvinetse pamusoro pekupera kwemavara kana lipstick kupera, achigara aine chivimbo uye achipenya.
Maitiro ekushandisa 3CE Blurring Liquid Lip
Isa lipstick pakati pemuromo wepasi, uchichenjerera kushandisa huwandu hwakakwana kuitira kuti lipstick isanamatira kumazino kana smudge.
Isa lipstick pakati pemuromo wezasi, uchichenjerera kushandisa huwandu hwakakwana kuitira kuti lipstick isanamatira kumazino kana smudge. Dzvanya miromo yekumusoro neyezasi pamwe chete kakati wandei kuisa lipstick zvakaenzana.
Kugadzira iyo ombre lipstick athari, unogona zvakare kushandisa ruoko kana bhurasho rakasarudzika kuparadzira zvakaenzana padivi pemuromo, zvichibatsira ruvara rwe lipstick kupararira zvishoma nezvishoma kumutsara wemuromo.
Nzira yekushandisa miromo yakazara
Isa lipstick zvakaenzana kubva pakati pemiromo kusvika kukona yemiromo, pinza miromo kana kushandisa brashi kuparadzira lipstick.
Rongedza miromo kuti igadzire chimiro chemuromo chaanoda, sanganisa zvakanyanya kuita kuti lipstick iwedzere kuenzana. Anogona kusarudza kuisa marata e lipstick pamusoro pemumwe kuti abudise toni yeruvara rwe lipstick zvakanyanya.
Maitiro ekushandisa pane kutsvuka
Mushure mekuisa primer, hwaro, anozoisa lipstick paganda (matama) uye anoshandisa bhurasho kusanganisa (nekukurumidza) kushandura ganda kuti risave pink / orenji toni, ‘mix-and- match’ ne lipstick. ruvara rwaakasarudza.
Ongorora uye ruzivo 3CE Blurring Liquid Lip
Chloe Nguyen – Runako Blogger: “Zuva rega rega mumugwagwa, Quynh Anh anofanirwa kuzora 3CE Blurring Liquid Lip pamiromo yake setsika. Ndakasarudza iyo Pull Off ruvara rwunyoro uye zvishoma… sexy!
Trinh Pham – Musikana Anopisa/Runako Blogger: “Kuwira murudo ne3CE Blurring Liquid Lip’s gumi ekunyengedza toni uye yakareruka-se-makore-yakasvibira lipstick, kuzora lipstick itaridzi-yakanaka yega pasina fussy make-up!”
Zvakanakira uye kuipa kwe3CE Blurring Liquid Lip
Zvakanakira 3CE Blurring Liquid Lip
Cons of 3CE Blurring Liquid Lip
Iyo lipstick ndeye super matte uye inochengetedza kutsetseka uye kutsetseka kwemiromo, zvisinei nemhedzisiro uye shanduko yemamiriro ekunze, uchichengeta ruvara kwenguva yakareba.
Mutengo unonzwisisika, unokodzera vatengi vazhinji.
Akasiyana-siyana lipstick mavara ane akawanda emazuva ano toni.
Elegant uye nyore dhizaini.
Nhete yakatetepa ye lipstick, isa kakawanda kuti uwane iyo yakajairwa ruvara.
Kupi kunotenga 3CE Blurring Liquid Lip lipstick? Ngani?
Kutenga Genuine 3CE Blurring Liquid Lip, unogona kutenga zvakananga kumashowrooms munyika yese kana kutenga online pa 3CE Vietnam’s yepamutemo webhusaiti: https://www.3cevietnam.com.vn/. Pamusoro pezvo, zvitoro zvekugovera zvechokwadi zviri Tiki, Lazada, Shopee… uye mamwe e-commerce mapuratifomu zvakare ane mukurumbira ekutenga kero.
3CE Blurring Liquid Lip inoyemurwa zvakanyanya neyakapfava lipstick uye akasiyana emavara evasikana kusarudza kubva. Nhasi, vasikana, zvisarudzire wega lipstick nehunhu hwako kuti uende nenzira ine chivimbo, gadzirira mwaka mutsva wakanaka!
Ndatenda nekuverenga uye kukuona mune inotevera nhevedzano yeakadzama wongororo!
← 25 Quán bar Sài Gòn, vũ trường beer club TPHCM sôi động nổi tiếng nhất | Excitinghochiminhcity
2 Cách nhân giống Cây Trầu Bà cảnh SIÊU đơn giản | Excitinghochiminhcity →